Paul Pogba oo qarka u saaran inuu ka tago Manchester United & Kooxda uu ku dhow yahay inuu ku biiro oo daaha laga rogay – Gool FM
Paul Pogba oo qarka u saaran inuu ka tago Manchester United & Kooxda uu ku dhow yahay inuu ku biiro oo daaha laga rogay
Haaruun October 16, 2021
(Manchester) 16 Okt 2021. Xiddiga khadka dhexe ee Manchester United ayaa la soo warinayaa inuu qarka u saaran yahay inuu isaga tago kooxdiisa, waxaana daaha laga rogay Naadiga uu ku dhow yahay inuu ku biiro.
Paul Pogba ayaa ku dhow inuu ku biiro Kooxda Real Madrid ee ka dhisan Caasimadda Spain, waxaana heshiiskan gadaal ka riixaya Mino Raiola.
Warsidaha ABC ayaa warinaya in laacibka khadka dhexe ee Manchester United uu ku dhow yahay inuu ka mid noqdo Kooxda Real Madrid.
Pogba ayaa beeca xorta ah noqon doona dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana Real Madrid ay isku diyaarinaysaa inay hordhigto dalab uu xilli ciyaareedkii ku qaadanayo 14 milyan oo euro oo u dhiganta 12 milyan oo gini ama 16 milyan oo dollar.
Wakiilka ciyaaryahan Pogba ee Mino Raiola ayaa gadaal ka riixaya heshiiskan, isagoo doonaya in Real Madrid uu isugu geeyo xiddigaha Faransiiska ah ee Karim Benzema, Paul Pogba iyo Kylian Mbappe.
Real Madrid oo kooxaha Ingiriiska kula dagaallameysa saxiixa xiddig muhiim u ah Juventus
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Watford iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey